Adeer Cawad Casharo kuma ilaawi doono | allsanaag
Adeer Cawad Casharo kuma ilaawi doono
Magaalada Taariikhiga ee Laasqoray ayuu ku dhashay 73 sano ka hor waxaana maanta lagu aasay qabuuraha Mavis ee Brampton, Ontario, Canada
Allah ha u naxariistee Cawad Axmed Casharo oo habeenkii Xalay ku geeriyooday Dalka Canada ayaa sanadkii 1944 ku dhashay degmada Laasqoray, oo markaas hoos tagaysay Saldanadii Warsangeli oo waqtigaas ka talin jirtay degaanadaas.
Sheekh Cawad Casharo, labadiisa waalid Allah ha u naxariistee waxay ka soo kala jeedeen qoysas aad looga yaqaanay Saldanadaas. Aabihii waxa la oran jiray Axmed Casharo, hooyadiisna Xaawo Xusee Saalax oo la dhalatay Ibraahim Xaaji saalax oo ka mid ahaa Daraawiishta. Ingiriiskuna uu aad u raadin jireen inay nolol ku qabtaan.
Cawad Casharo waxbarashada Quraanka iyo Dugsiga hoose wuxuu ka bilaabay degmada laasqoray. Dugsiga dhexe wuxuu uga baxay Dayaxa, halka uu dugsiga sare uu ku dhamaystay degmada Sheekh. waxbarashada sare wuxuu ku qaatay liibiya iyo Ciraaq.
Cawad Caharo shaqdiisii ugu horaysay wuxuu ka bilaabay dalka Soomaaliya sanadkii 1965, waxayna ahayd arimaha bulshada iyo diiwaangelinta.
Sanadkii 1968 wuxuu noqday maareeyaha guud ee warshadda Kaluunka Laasqoray. Arimo siyaasadeed oo jiray ayaa loo xiray waqtigaas. gaar ahaan dhowrkii casho oo ay doorasho socotay wuu xirnaa.
1971 – 74 wuxuu noqday iskuduwaha Xijiga iyo beeyada ee gobolka Bari.
1975 dilkii Culimada ayuu goostay inuu Soomaaliya isaga baxsado, Wafti Carwo ku soo bandhigaysay dalka Masar oo madaxweynuhu hogaaminayey ayuu sii raacay dibna uma soo laaban.
Wuxuu tegay Liibiya iyo Ciraaq. Dalka Ciraaq ayuu kaga mudaharaaday Kacaankii waxaana xabsiga dhigay Saadaam Xuseen.
Sideetameeyadii ayaa dawladda CANADA u soo qaaday dalkeeda. la soco qaybta labaad
← Dardaarankii Allah ha u naxariistee Cawad Casharo Wacyi gelinta ururka SSB oo meel fiican maraysa →
3 thoughts on “Adeer Cawad Casharo kuma ilaawi doono”
Abdi October 31, 2017 at 12:33 am
Professor cawid cashro will be missed in Puntland and in Somalia Legend,
Omar Dualeh October 31, 2017 at 5:06 pm
illahayow u naxariiso walaalken Axmed Cawad Asshar isku magaalo ayaanu ahayn 90sa
Reer Bari November 2, 2017 at 1:32 pm
Allaha u naxariisto marxuumka.
Leave a Reply to Omar Dualeh Cancel reply